China Asymmetric Earrings Jewelry Unique Hand & Eye Cute Silver Bling Drop Earrings Manufacturing and Factory | Fitiavana & Fitiavana firavaka
Kavina Asymmetrika Firavaka tsy manam-paharoa Tanana & maso Kavina mitete volafotsy Bling
Fitaovana:Volafotsy s925, voaravaka 5a cz mamirapiratra, mety amin'ny fety.
Details momba ny famolavolana: endrika asymmetrika amin'ny endrika eropeana sy amerikana, kavina mitete amin'ny tanana sy maso tsy manam-paharoa.
Fashion fironana vaovao kavina, mety ho an`ny vehivavy.
Asymmetrika maso sy tanana kavina volafotsy sterling, singa Eoropeana sy Amerikana stylish, endrika tsotra, tsiro tsy manam-potoana, voapetaka amin'ny 5A zircon mamirapiratra, mety amin'ny fety.
Firavaka volafotsy madio sy mistery tsara tarehy, volafotsy 925 avo lenta no voafantina. Ny fiantraikan'ny fitaratra amin'ny firavaka volafotsy dia voapoizina tsara mba hampihenana ny lesoka. Natao tamim-pitandremana, amin'ny alàlan'ny fizotry ny electroplating multi-sosona, ny firavaka volafotsy dia manana endrika malefaka sy amin'ny antsipiriany izay tsy mora levona, mahatonga azy io ho mora kokoa ny mitafy.
Famolavolana: Ny mason’ny devoly dia midika hoe mitoka-monina ny ratsy, tsy mamela afa-tsy ny tsara sy ny mpiahy ny malala, mitsoka ny fofona ratsy sy ny fialonana, na dia atao hoe devoly aza, dia tena miambina, ary ny tanana koa manana. ny dikan'ny fiambenana, fanantenana Amin'ny alalan'ity kavina ity dia azo sakanana ny zavatra ratsy, mba hahazoana vokatra fiarovana.
Ireo kavina maro be sy malefaka ireo dia mandika ireo lamina tsara vintana mahazatra miaraka amin'ny endrika maoderina, miaraka amin'ny dikan'ny fitadiavana vintana sy ny fisorohana ny ratsy. Azonao atao ihany koa ny manaisotra ny ampahany amin'ny pendant ary manao izany miaraka amin'ny kavina C miendrika C kanto sy malala-tanana.
Design:Ny endriky ny kavina dia aingam-panahy avy amin'ny mason'ny devoly, ary ny famolavolana an'i Ziah dia nanao fanovana sasany izay tsy mitovy amin'ny mason'ny devoly. Ny kavina dia natao havia sy havanana asymmetrika. Ny endriky ny maso, fa misy maso eo am-pelatanan-tanana; ny hevitry ny maso dia mitovy amin'ny an'ny mason'ny devoly. Ny devoly no tena miambina, ary ny tanana koa dia manana ny dikan’ny hoe miambina. Manantena aho fa amin'ny alalan'ity kavina ity dia azo sakanana ny zavatra ratsy, mba hahazoana ny vokatry ny fiarovana.
Any Torkia, ny mason’ny devoly dia zavatra iray manalavitra ny fanahy ratsy; misy angano: ny hatsaran-tarehy sy ny fahombiazana dia mora mampialona ny olona, ​​angamba tsy fantatry ny olona voakasik'izany. Ny 'Mason'ny demony' dia hiambina anao ary hanakana ny fijery mialona sy ratsy. Raha tapaka ny 'Mason'ny demony' dia midika izany fa voavaha ny loza. "
teo aloha: 925 Sterling Silver Hoop Earrings Colorful Rainbow Stone Huggie Earrings
Manaraka: Fashion Rainbow Cubic Zirconia 925 Silver Hoop Huggie Kavina